Shina: Nasavorovoron’ny T-shirt iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2009 13:33 GMT
Toa nahasarika ny mason'ny polisy sy nanohintohina ny filaminanam- bahoaka ny soratra tamin'ny T-shirt nanaovan'ny mpahay lalàna Liu Shihui. Omena anareo eto ambany ny ampahan'ny voasoratry Liu ao amin'ny bolongany momba izay niainany tany Guangzhou.
Niandry ny sipako tao amin'ny garan'ny metro tao Guangzhou tamin'ny 12 Mey 2009 tamin'ny 5 ora hariva. Fantatro fa efa an-dalana izy raha niantso azy aho.
Taorian'izay dia nisy mpiambina nanatona , nandinika ahy ary nanontany ahy tamin'ny feo mampatahotra:‘Fa inona no mahazo anao? Fa inona no ataonao eo?’ Nolazaiko azy fa miandry ny sipako aho. Saingy niandravandra be ny masony nijery ny T-shirt nanaovako, ‘Tsy mety fiakanjonao izao! INona no dikan'izao? Tsy afaka manao fiakanjo toy izao eto ianao!’
Nanao T-shirt nosoritsoritako ihany aho, izay misy fanamarihana toy izao indrindra eo anoloana: ‘Atambo ny fanjakazakan'Antoko Tokana – hoy ny Xinhua Daily’. Ao an-damosina kosa dia misy sombin-tenin'ny filoha teo aloha Liu Shaoqi manao hoe, ‘Manohitra ny fanjakazakan'antoko tokan'ny KMT ny antoko Antoko Komonista!’ Ny soratra teo anoloana no nanaitra ny mpiambina, izay toa mamelona ‘adin-tsaranga’.
Namaly aho, ‘Fa inona no tsy mety amin'ny akanjoko? Fa misy dikany inona aminao io? Fa manohintohina olona angaha aho raha miandry olona eto?’
Tsy nampoizina fa nisinisy ny voasarika hitazana.
这时，一个警察（警号是018464）来了，另一个保安（2409号）来了，地铁工作人员数人来了，其中地铁一人手持相机 对我拍照。围观的人越来越多，人们以新奇和不解的目光注视着我的衣服和眼前突发的事情。在警、保、铁三方如临大敌、铜墙铁壁的包围中，在围观人群不明就里 的注视中，我犹如汪洋中的一条独木舟。
Tamin'io fotoana io dia nisy polisy niaraka tamina mpiambina iray nanatona.Tahaka izany ihany koa ny mpiasan'ny metro iray izay naka sary ahy. Tafajanona nanodidina anay ny olona ary manombatombana ny T-shirt-ko sy ny zaamitranga. Tahaka ny lakana kely anaty ranomasimbe ny tenako eo anatrehan'ireto polisy, mpiambina sy mpiasa maro manodidina ahy.
‘Tsy mety ny fisian'itony soratra itony (Atambo ny fanjakazakan'antoko tokana) amin'ny T-shirt. Ndao hiaraka aminao hisian'ny fanadihadiana bebe kokoa.’ Hoy ilay mpiambina vonton'ny fihetseham-pon'ny adin-tsaranga.
指着胸前的文字对保安解释：这是共产党自己说过的话，是新华日报的社论，如果你读过书的话，应该知道抗战时期有个《新华日 报》，你可以自己去查，并且告知他我是律师，请你不要妨碍我的人身自由。1776号保安暴跳如雷，露出了十足地痞的面目，当着警察以及众多围观人群破口大 骂：”你个傻逼，管你是什么师，我读书比你多得多。”并且当众对我讪笑道：”就你这个样子也有女朋友？”面对这个满嘴喷粪的人渣，我怒不可遏，一阵恶心。
Notondroiko ny soratra, sady niteny ilay mpiambina aho, ‘Nolazain'ny Antoko Komonista tenany anie io e. Tao amin'ny matoandahatsoratry ny Xin Hua Daily io (gazetim-panjakana Shinoa nialoha ny ankehitriny). Raha nandalo fianarana ianareo dia tokony ho fantatrareo ny fisian'izany Xinhua Daily izany nandritra ny ady nifanaovana tamin'i Japan nandritra ny taompolo 1940. Azonareo hamarinina izany.’ Niteny taminy ihay koa aho hoe mpahay lalàna ka aoka tsy hanohintohina ny zoko. Rangitra ilay mpiambina, nitabataba tamiko tahaka ny jiolahimboto teo anatrehan'ny besinimaro, ‘Le adala lahy ity, tsy raharahako izay maha-anona an'ialahy any. Namaky boky betsaka noho ialahy leity ny aty a.’ ary dia notsiratsirainy teo aho,'Olona tahaka izao ve no manana sipa?’ Mankaloiloy ahy ity olona manompa manoloana ahy ity.
警察态度虽然没有保安恶劣，但是显然把我当嫌疑人看待，这让我很不舒服。我给他解释：这句话是1946年3月30日中共中 央机关报《新华日报》的社论，并跟他说，我女朋友已经出站了，现在她找不见我，我要去接她。警察不许，并要对我“进行传唤”。我指出这是对我人身自由的非 法限制，我接不到女朋友，她会很着急。这时警察人数已增为几人，有的强硬，有的和缓。他们和保安将我推拽到一处空地上，然后地铁人员迅速地在我周围竖起了 屏风帷帐，将我圈在墙边，以隔阻围观人群探寻的目光和我恤衫文字的对接。
Tsy dia naninona ahy loatra tahaka ilay mpiambina ilay polisy, saingy hita miharihary fa mampiahiahy azy ny fijeriny ahy . Tsy azoko ny aiko. Nohazavaiko taminy fa, ‘Nalaiko avy tamin'ny matoandahatsoratra navoakan'ny gazetin'ny antoko komonista, Xihua Daily, tamin'ny 3 Marsa 1946 io soratra io.’ Nilaza taminy ihany koa aho efa tonga ao amin'ny gara izay ny sipako. Aoka amin'izay aho haka azy. Nolazaiko azy fa tsy manara-dalàna ny fitazonana ahy. Nihamaro ny polisy manodidina tamin'io fotoana io, ny sasany mahery fihetsika moa ny hafa manaja ihany. Nosintonin'izy ireo ho eny amin'ny toerana malaladalaka aho ary nohodidinin'ny mpiasan'ny gara fakantsary maro aho. Nataony izany tsy ahitana ny voasoratra amin'ny T-shirt-ko.
Avy eo dia nitondra an'i Liu tany anaty efitrano kelikely izany ny polisy sy ny mpiambina hanao fanadihadiana. Nisy mpiambina iray nanompanompa azy hatrany tao hoy i Liu arymitady hamely totohondry azy hatrany. Soa ihany fa voasakan'ny polisy ny fihetsik'ity mpiambina ity. Avy eo dia nalainy sary i Liu.
Nanontany ahy izay fihavian'ny sombin-tsoratra ny polisy. Nohazavaiko azy ireo tamin'ny antsipiriany ny momba io ary nanolo-tena aho hanampy azy ireo hikaroka azy an-tserasera. Saingy nolazain'iy ireo moa fa tsy mahita solosaina eo amin'ny manodidina izy ireo. Saingy mino aho fa tsy maintsy hahita ny sombin-tsoratra amin'ny fomba hafa hatrany ry zareo.
Nandritra ny fanadihadiana dia noraisin'i Liu an-tsokosoko tao amin'ny fndainy ny nomeraon'ireo polisy niresaka taminy.
我要求警方向我出具对我进行留置或者其他类别强制措施的法律手续，但是警方称没有。我要求做笔录，先是被拒绝，后来在变换 了一个拘禁地点后，才应允我。我于晚上19时自书了一份《我被非法拘禁的经过》交给警方，要求对方“赔礼道歉，赔偿损失。”我告诉警方：这是非法拘禁，我 作为律师日后将会告你们，并且会把这件荒唐的事情传上网。
Nanontaniako azy ireo ny antontan-taratasy ahafahan'izy ireo mitazona ahy, saingy tsy novaliany izany (nolaviny). Nanolo-tena tamin'izy ireo aho hanampy azy ireo amin'ny fanaovana tatitra, nandà izy ireo tamin'ny voalohany saingy nampanantenainy ihany rehefa voafindra any amin'ny toeran-kafa aho. Nosoratako amin'izay ny filazalazako ary nitaky fialantsiny sy onitra aho. Nolazaiko azy ireo fa, ‘ Fitazonana tsy manara-dalàna izao. Amin'ny maha-mpahay lalàna ahy dia afaka mitory anareo aho ary hampiely izany an-tserasera.’
Hita ho nihanalefaka ny fihetsiky ny polisy. Niezaka ny handresy lahatra ahy izy, ‘Nandritra ny ady nifanaovana tamin'i Japana dia nanohitra ny fanjakazakan'ny KMT ny Antoko Komonista, ary dia io no navoaka tamin'ny matoandahatsoratra. Saingy lasa manana hevitra politika hafa io soratra io amin'izao fotoana izao…sns’.
Novaliako, ‘ mpahay lalàna aho. Ny fepetra hany ahafahako mitsara ny marina sy ny diso dia ny lalàna. Tsy misy afaka manakana ahy hanao zavatra tsy voararan'ny lalàna. Moa tsy izany ve no ‘mitondra ny firenena amin'ny alalan'ny lalàna’ voasoratra ao amin'ny Lalampanorenana? Fa tsy misy soratra manao hoe ‘mitondra ny firenena amin'ny filazana izay manohintohina na tsia’.
一警员经过较长时间的伏案工作，终于敲出了一份针对我的“讯问笔录”。我粗略地看了一下：上面关于涉嫌违法的事由是“制造 谣言和扰乱社会秩序”。我讥笑着对张副所长说：“你不觉得这太侮辱公众常识了吗？如果把它放到网上去，你不怕这个东西会气死躲猫猫？”张副所长无言。鉴于 笔录中多处与事实不符，并且警方不同意我复印该笔录的要求，所以我顺理成章地拒绝在那份笔录上签字。
Nanoratra ny ‘tatitry ny fanadihadiana’ ihany ny polisy. Niketrona aho. Voasoratra tao fa ‘nampiely tsaho sy nanohintohina ny filamianm-bahoaka aho’. Naneso aho, ‘ Tsy eritreretinareo ve fa fanosihosena ny faharanitan-tsaina izao? Moa ve tsy eritreretinareo ho “absurde” (hevitra taingina) noho ny raharaha ‘miala saka’ izao’? Tsy nahateny izy.navilan'ny naoty manko ny zavamisy ary tsy navela hanana ny dikan-tsoratra aho, nandà tsy hanasonia aho.
Angamba hitan'ny polisy ihany ny nangalako ilay fehezanteny, angamba zatra ny fomban'ny fanadihadiana aho, na angamba heveriny fa azo atao ny mitazona olona noho ny T-shirt, na angamba taitra noho ny fampitandremako ny hamoahako ny tantara an-tserasera ry zareo, ka nitady marimaritra iraisana, nanontany ahy izay tadiaviko.
Tamin'ny farany moa dia niala tsiny taminy ilay mpiambina nanositosika sy nanompanompa an'i Liu.
在和女友回家的路上，我满脸疲惫，感慨万千。今天的环球已然大不同于抗战时期，星星不再是那颗星星，月亮也不再是那个月亮。我不知道，在人类近三分 之二的国家已经采用民主制度的今天，因为将某一政党昔日曾经揭示了客观规律的一句历史名言印在恤衫上，而受到后世同一政党（政府）如临大敌之生猛对待的， 在当今世界扳着指头数，究竟还能扳倒几个指头？
Nandao ny kaomisariàn'ny polisy aho tamin'ny 8:10alina. Ora telo izay no lasa hatramin'ny nisamborana ahy tao amin'ny metro.
Valaka tanteraka aho teny an-dalana hody niaraka tamin'ny sipako. Tsy mitovy tamin'ny andron'ny ady nifanaovana tamin'i Japana intsony ny tontolo ankehitriny. Efa nandray ny rafitra demaokratika ny 2/3 n'ny firenena manerantany. Nanoritra fotsiny izay voasoratry ny antoko tamin'ny T-shirt-ko aho, fehezanteny milaza ny marina. Saingy ankehitriny moa dia heverina ho fahavalom-pirenena aho, dia ilay antoko namoka azy indrindra am-polony taona maro izay. Ratsantanana firy moa no azoko atsangana raha te-hanisa ny firenena sisa miangana aho?